Yakagadzirira Super Mario Run? Isu tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive | IPhone nhau
Yakagadzirira Super Mario Run? Tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive
Super Mario Run iri padhuze nepakona yekuvandudza hupenyu hwedu zvakare, kana zvirinani ndizvo zvinotarisirwa naNintendo. Iyo yekuJapan kambani yatosvika kuApp Store nemitambo yakati wandei isina kutora chero munhu, zvisinei, iye anozivikanwa zvikuru pombi yemvura munhoroondo anogona kupidigura zvese zvinhu kumusoro, ndozvinoita sekunge zvichave, kunyangwe Nhau dzichangoburwa dzatinadzo takagamuchira nezve Super Mario Run yatisiira isu kuravira kunorwadza. Isu tinokuudza iwe zvachose zvese zvaunoda kuti uzive nezve Super Mario Mhanya mazuva mashoma isati yatanga.
Super Mario Run, iro zita iro Nintendo afunga kupa kuzita iri, musanganiswa pakati pemutambo wepuratifomu uye tiered-isingamhanyi. Asi kuitira kuti pasave nemunhu anonzwa kuora moyo pazuva rekuvhurwa kwayo, tinoendako nezvatinofanira kuziva nezvazvo.
1 Super Mario Run iri kuuya kuIOS uye Android?
2 Iwe unoda internet yekubatanidza?
3 Ndeapi marongero atinogona kutamba Super Mario Run?
4 Mutambo uchatibhadharira marii zvachose?
5 Inowanikwa munyika dzipi?
6 Unotamba sei Super Mario Mhanya?
Super Mario Run iri kuuya kuIOS uye Android?
Isu tinotanga nezvakakosha, uye ndeye iyo Super Mario Run Icharova iOS chete muna Zvita 15. Isu tinongotaura chete, nekuti kwemwedzi mishoma inogona kungotorwa pasi parunhare rweApple, zvisinei, handifunge kuti vashandisi veApple vachatora nguva yakareba kuti APK iri nyore isvinwe pamhepo kuti vakwanise kutamba Super Mario Run paApple .
Nguva yekutangisa kutenderera pasirese inogona kunge yakasiyana, kunyangwe chinhu chine musoro ndechekuti inotangwa na19: 00 dzemasikati nguva yeSpanish, inova nguva yakasarudzika yeApple yenhau dzayo. Kunyange zvakadaro, Unogona kutsvaga Super Mario Run muIOS App Store uye ndokumbira kuziviswa kana ichiwanikwa.
Iwe unoda internet yekubatanidza?
Ndizvozvo, Nintendo anga achida kushandisa yekutanga anti-piracy dziviriro sisitimu muSuper Mario Run, isu tiri kutaura nezve yekusingaperi uye isingachinjiki internet yekubatanidza. Nenzira iyi, Vachave nechokwadi chekubvisa vanobiridzira. Uye ndeyekuti Nintendo ndeimwe yemakambani akakuvara zvakanyanya nehupombwe, izvo zviri kuitungamira kuti itore mhando dzematanho aya zvakare mumitambo yayo mitsva yePokémon Zuva neMwedzi.
Ndeapi marongero atinogona kutamba Super Mario Run?
Hatizive izvo zvinotsanangurwa neApple, zvisinei, muIOS sIzvo zvinongowanikwa chete pane izvo zvishandiso zvine 64-bit processorIzvi zvinoreva kuti isu tinogona chete kuiridza pazvishandiso zvinomhanya iOS 10 kana izvo zvakatangwa kubva ku iPhone 5s, izvi zvichisanganisirwa.
Mutambo uchatibhadharira marii zvachose?
Super Mario Mhanya inoratidza matatu emadhiyero, asi iwo mutambo uzere Ichadhura isingasviki pane € 9,99, mutengo pamwe wakanyanyisa, uchifunga kuti uri pamutengo wakaenzana kana wakakwirira kupfuura mitambo ine kukura kwakanyanya kwakanyanya senge GTA San Andreas, o Anodheerera.
Inowanikwa munyika dzipi?
Tinogona kutamba Super Mario Mhanya uchitenderera Nyika zana negumi neshanu kubva pazuva radzakatangwa. Nekudaro, maererano nemutauro, ivo vachasarudza: Chirungu, Sipanish, chiJapanese, ChiGerman, ChiFrench, ChiPutukezi, Chiitaliya, ChiRussia uye chinyakare Chinese.
Unotamba sei Super Mario Mhanya?
Isu tatoona imwe mimwe Gameplay, zvisinei, zviri nyore hapana mubvunzo kuti zvinonyanya kukunda, Super Mario Run mutambo uyo unonyanya kuve nekusvetuka, senge zvese zvakakosha Super Mario zvaburitswa, kana tisingatarise nyaya dzakadai seSuper Mario 64 (inyanzvi). Takusiira iwe kumusoro uko vhidhiyo nezve izvo zvine Super Mario Run ine. Nekudaro, nekutenda kumatatu ayo ekuratidzira tinogona kusarudza kuti tinonyatsoda kushandisa maeuro gumi anodhura uyu mutambo weNintendo.
Chero zvazvingaitika, nekukurumidza kana Super Mario Run ikaburitswa, isu tinokuzivisa iwe muApple News mumutemo wakanyanya kuomarara, uyezve tichakuunzira iwo akanakisa magwara uye mitambo yemitambo yeiyi inonakidza chikuva mutambo weanozivikanwa zvikuru pombi iyo nhoroondo yakambopa, nekuda kweNintendo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Yakagadzirira Super Mario Run? Tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive
Chinozivikanwa chinhu kana chikaonekwawo muApple TV yechizvarwa chekupedzisira?
Apple inoshanda muApple Chitoro chitsva iri muWashington DC
Samsung ichadzima iyo Galaxy Note 7 iyo inoramba ichishanda